Huawei Nwunye 8, nyocha nke kacha mma phablet na ahịa | Gam akporosis
O doro anya na uto nke Huawei n'ahịa telephony. Afọ ole na ole gara aga, onye nrụpụta Asia bidoro ijide Samsung na Apple ma ọ bụrụ na ọ gaa n'ihu na ọnụego a ọ gaghị ewe oge iji ruo ebe ahụ. Izu ole na ole gara aga egosiri m gị mmetụta mbụ m nwere na Huawei P9, ọnụ nke hapụrụ m ezigbo mmetụta na nke m ga-ebipụta nyocha zuru oke n'oge na-adịghị anya. Ma ugbu a, ọ bụ oge nke Huawei Nwunye 8.
Ma ọ bụ na n'oge mbipụta ikpeazụ nke CES nke Las Vegas Huawei juru ya anya site n'igosi phablet na ihuenyo 6-inch. Ugbu a, m na-ewetara gị a Huawei Mate 8 nyochaa, a ekwentị na-anọchi n'ihi na ya àgwà kwuchara na oké obodo kwụụrụ.
1 A na-aga n'ihu imewe na adịchaghị okokụre
3 Ihuenyo nke na-enwu na ìhè nke ya
4 Huawei Mate 8, nnwere onwe a na-enwetụbeghị ụdị ya
5 Igwefoto dị ịrịba ama
5.1 Foto ndi nlere na Huawei Mate 8
8 Isi ihe na ihu ọma
9 Ihe megide
9.2 Foto ihe osise nke Huawei Mate 8
A na-aga n'ihu imewe na adịchaghị okokụre
Aga m amalite site n’ikwu banyere ya Huawei Mate 8 imewe. N'ezie, na mbụ, m chọrọ iji mesie ọmarịcha unboxing nke ekwentị a. Huawei na-elekọta ihe niile, yana igbe dị elu nke gụnyere, na mgbakwunye na ekwentị na eriri ndị anyị ji, ekweisi dị elu, ihe nchebe ihuenyo na mkpuchi. Okpu okpu m puru na nke a.
Ọ bụrụ na imewe nke nkwakọ ngwaahịa na-elekọta ala ruo na nkọwa ikpeazụ, can nwere ike iche na ekwentị ruru ọrụ ahụ. Nwatakịrị wee ruo ọrụ a! Ihe a na-agbaso usoro nke onye nrụpụta, nke na-enweta asụsụ a na-achọpụta amamịghe: amata 8 na-egosi ozugbo dị ka Huawei.
Will ga-ahụ na e nwere esemokwu dị iche iche gbasara 7 ma ọ bụ Nwunye S n'ihe gbasara imewe. Ọ dị, enwere nkọwa m hụrụ n'anya: azụ nke Huawei Mate 8 na-agbado gburugburu, na-ezere atụmatụ ndị gara aga na ihe ndị ahụ emepụtara dabere na akụkụ, ma na-enye ọdịdị pụrụ iche.
Ma gịnị banyere njedebe ya. Ihe owuwu nke aru nke Nwunye 8 na-arụ ọrụ, sandblasted aluminom na ígwè, na-enye ọnụ ọnụ a pụrụ iche. A na-agbasa ihe ndị a n'ime akụrụngwa ahụ, na-ezobe ahịrị plastik ahụ na-adịghị mma maka antennas nke ụdị ndị ọzọ maara. nke ihuenyo ruru n'akụkụ.
Achọrọ m ọnọdụ nke akara mkpisiaka ihe mmetụta: Achọpụtara m na ọ na-adaba na azụ karịa na ihu dị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ nzọ, ọ bụ ezie na nke a dabere na uto nke onye ọrụ ọ bụla.
Akụkụ aka nri bụ ebe anyị ga-ahụ bọtịnụ / ngbanye bọtịnụ na mgbakwunye na igodo njikwa olu. ya iwu siri ike, dị ka ekwentị, àjà a nnọọ obi ụtọ aka na na obere ike ike na ike button na-enyere anyị aka iche na-enweghị na-achọ na nke button anyị na-ịpị. Dị ka mgbe niile, Huawei na-elekọta nkọwa niile.
Onwe m, m na-eche banyere mmecha na ekwentị na n'ihe banyere ọhụụ ọhụrụ nke Huawei enweela mmetụta dị mma. Ga - ahụ nnukwu ọrụ ndị nrụpụta rụrụ, bụ ndị gosipụtarala a ekwentị nwere oke mma gwụchara na elu nke elu elu nke ya.
Su -eche na aka bụ ihe magburu onwe Na agbanyeghị na ọla edochachara ya, ekwentị anaghị amị amị amị. Ọ bụ ezie na nchekwa nchekwa bịara, ọ masịrị m iji ekwentị na-enweghị ya, iji nyekwuo nyocha ebumnuche n'akụkụ a na mmetụta dị ezigbo mma: ọ dịbeghị oge m nwere mmetụta na ekwentị na-amịpụ n'aka m. Otu akụkụ nke uru dịkwa na akụkụ ya.
N'ihi na n'akụkụ a Huawei kpara ya mma. Anyị na-eche ihu na ekwentị nwere ihu igwe anụ ọhịa isii mana ọ dị ka ọ dị n'aka. Nke ahụ bụ na Huawei jisiri ike mepụta obere okpokolo agba n'akụkụ anọ nke ekwentị ahụ, na mgbakwunye na oke ọkpụrụkpụ na-enye ohere, n'agbanyeghị nnukwu ihuenyo ya, ekwentị dị ezigbo ụtọ ma dịkwa mfe iji. Isi ihe ọzọ dị ịrịba ama na-abịa na ịdị nfe nke ọnụ, dịka nha ya: gram 185.
Akụkụ X x 157.1 80.6 7.9 mm
Ihuenyo 6-anụ ọhịa IPS-Neo LCD 1920 × 1080 pixels (367dpi) na Corning ozodimgba iko 4 oyi akwa
Nhazi Hi-isi HiSilicon Kirin 950 (Anọ 72GHz Cortex-A2.3s na anọ 53GHz Cortex A1.8s)
Batrị 4.000 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa Euro 520 site na Amazon
Maraworị na ụlọ ọrụ Asia na-amalite chipsets nke ya na maka Huawei Mate 8 ha na-etinye na ndị dị ike Kirin 950 SoC, ihe nhazi nke HiSilicon haziri, nke ndi otu Huawei ma nyekwa oru oma.
Isi ihe nhazi dị ka Kirin 935 hụrụ na Huawei Mate S dara ma ọ bụ Nkwanye 7 Ọ bịara na ngalaba eserese, site na ijikọta GPU ndị merela agadi. Mana n'okwu banyere Kirin 950 odi ka nsogbu a adighi.
Ma ọ bụ na Huawei nwere nzọ na dị ike ARM Mali-T880 GPU na ntọala MP4 gị. Mpempe akwụkwọ eserese ka mma karịa nke gara aga yana nke ahụ, mgbe ejiri ya na ihuenyo zuru oke nke Huawei Mate 8, na-enye ọmarịcha arụmọrụ. Dịka ị pụrụ ịhụ na nyocha vidiyo, enwere m ike ịnwale ọtụtụ egwuregwu na enweghị m nsogbu ọ bụla na nke a.
na egwuregwu na-agba ọsọ ire ụtọ na ọmụmụ, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ha na enweghị nsogbu ọ bụla. N'ihi na Huawei Mate 8 anaghị ekpo oke ọkụ mgbe eji ya eme ihe. Ihe nkowa ozo kwesiri itinye n'uche.
Na ekele ya Cortex-A73 cores nke na-enye a ezigbo oriri na kpo oku, Na mgbakwunye na ijide n'aka na ekwentị ahụ agaghị ekpo ọkụ mgbe ejiri ya kpụ ọkụ n'ọnụ, agwala m gị na Huawei Mate 8 nwere eriri maka nwa oge. Batrị ya bụ otu n’ime ike ekwentị a. Ma na mbụ m chọrọ ikwu maka ihuenyo gị.
Ihuenyo nke na-enwu na ìhè nke ya
Ogologo ya nwunye Ọ na-apụta mgbe niile maka ịnye igwe na nnukwu ihu na ntanye a nwere uru na ọghọm ya. Iji malite, ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ihuenyo zuru oke na akụkụ ndị a, ma ọ bụ opekata mpe jiri ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Nke a bụ isi ihe mere Huawei ji họrọ maka a LCD panel nke na-eme mkpebi Full HD. Asịrị mbụ ndị ahụ tụrụ aro na Huawei Mate 8 ga-enwe QHD panel dị ka Nexus 6P ma ọ bụ ihe AMOLED dị ka Mate S, mana ọ nweghị ihe nwere ike ịga n'ihu na eziokwu.
N'ikpeazụ nke Huawei Mate 8 na-ahọrọ otu panel nke nwere otu ọrụ ahụ nke na-arụ ọrụ nke ọma na onye bu ya ụzọ. Ọ ga-amasị m ịhụ ihuenyo OLED ma ọ bụ LCD nwere mkpebi ka mma, ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị na ọnụahịa ga-ebili nke ukwuu ma nwee ike belata nnwere onwe.
Na mpempe akwụkwọ, o doro anya na njupụta pixel abụghị nke kachasị mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ihuenyo nke Samsung Galaxy S7, ọ bụ ezie na agwalarị m gị na maka ọnụahịa ahụ ị gaghị ahụ ekwentị nwere ihuenyo dị mma karịa Huawei Nwunye 8.Gịnị ihuenyo nke Huawei Mate 8 adịghị njọ. Mana ọ bụghị nke kacha mma n'ahịa.
Ka anyị kwuo banyere nkọwa na ihuenyo Huawei Mate 8: ịmalite nke gị panel bụ ụdị IPS-NEO, nke a na-akpọ JDI screens. Otu ihuenyo dị ka nke dị na Nwunye 7, ọ bụ ezie na e meziwanyela nkọwa ụfọdụ, na-edozi ụda ahịhịa nke ụdị mbụ ahụ ma na-amụbawanye ihie (karịa 490 nits, 522 cd / m²).
Nke a na-enwu sụgharịrị ịbụ a ngosipụta na-enwu gbaa nke a pụrụ ile anya na-enweghị nsogbu ọ bụla n'èzí. Ọzọkwa site na iwetulata nchapụta na opekempe ị nwere ike ịgụ na-enweghị nsogbu n'ọchịchịrị zuru oke na-enweghị inye nsogbu anya.
na agba dị nkọ ma na-ewu ewu, na-enye nghọta doro anya. Na mgbakwunye, sọftụwia Huawei na-enye gị ohere ịhazigharị agba agba agba dịka uto nke onye ọrụ ọ bụla. Na nkenke, ihuenyo zuru oke nke na-ezughị ezu na atụmanya, mana na-enweghị iru ogo nke AMOLED. Ọ bụ ezie na m na-ahụ nnwere onwe ya, ana m ahọrọ IPS panel.
Huawei Mate 8, nnwere onwe a na-enwetụbeghị ụdị ya
Batrị ahụ na-abụkarị nnukwu ike nke ezinụlọ Mate na n'ihe banyere onye ọhụụ ọhụrụ nke Huawei's phablet line, ọ gaghị abụ ihe ọzọ. Na akwụkwọ anyị na-ahụ a 4.000 mAh batrị nke, ya na pikselụ nke ihuenyo ya na Kirin 950 ngwaike, na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ magburu onwe ya na nnwere onwe. Ya mere ọ dịla.
Nnwere onwe agaghị emechu gị ihu ma ọlị. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enwere ike iwepụ ya, ị gaghị echegbu onwe gị maka iburu banki ike. Ma nke ahụ bụ mgbe otu ụbọchị ojiji, Huawei Mate 8 nwere ọkara batrị na-eche ka o rie. Anyị na-ekwu maka iji otu eji.
Afanyela m batrị ahụ ka ọ na-egwuri egwu ihe dị ka awa abụọ kwa ụbọchị na Huawei Mate 8
Anọgidere m ebe a otu ụbọchị na ọkara. Kemmasi. Ọtụtụ n'ime otuto na-agara ya Gam akporo 6.0 na mmetụta UI 4.0, jiri mmegharị ngosipụta zuru oke.
Usoro a na - agwa gị nke ngwa a na - eji ebe nchekwa karịa akaụntụ ahụ, na - atụ aro imechi ha ka ha gbatịa ọchịchị kwụ ọtọ, na - enweta njirisi magburu onwe ya. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a ngwa ngwa ngwa ngwa ya na-enye gị ohere ịgba ụgwọ 37% nke ọnụ na nkeji 30 na ụgwọ zuru oke n'ime otu awa na ọkara, anyị nwere n'ihu anyị otu n'ime ekwentị nwere nnwere onwe kacha mma n'ahịa. A 10 maka Huawei na nke a.
Igwefoto dị ịrịba ama
La Huawei Nwunye 8 igwefoto ọ dịghị njọ ma ọlị. Anya ya bụ isi nke ihe mmetụta Sony mebere IMX298 16 megapixel na ngwa anya stabilization, na-adọ nchọpụta na-elekwasị anya na sọrọ ụda Ikanam flash awade nnọọ mma arụmọrụ.
Ihe mmetụta ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ntọala Bayer RGBG pixel nke na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na ụdị ndapụta ọ bụla. Na 27 milimita oghere na oghere f / 2.0 awade magburu onwe captures ọ bụ ezie na dị ka mgbe niile na mma-udo gburugburu.
Ozugbo ike gwụrụ, ogo nke ihe oyiyi ahụ na-ada ntakịrị karịa iji tụnyere igwefoto ndị ọzọ dịka Samsung ma ọ bụ Apple, ọ bụ ezie na anyị ga-echeta ọnụahịa ọnụahịa nke Huawei Mate 8 na-agagharị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe oyiyi ejidere, dịka ị pụrụ ịhụ, dị ezigbo mma na ịdị mfe nke ngwanrọ ya ga-enye anyị ohere ịse foto dị mfe ma dịkwa mfe. You bụ onye hụrụ foto n'anya ma na-achịkwa akụkụ ya niile? ọ dị mma ọrụ mode, Site na nke ị nwere ike imetụ uru ọ bụla dịka ISO ma ọ bụ ikpughe, ị ga-enwe ọ likeụ dịka nwatakịrị na-ese foto.
Ngalaba vidio ahụ bụ ebe ọzọ na-adịghị ike ebe ọ bụ na Huawei Mate 8-enye gị ohere ka ịdekọ a kacha nke 1080p na 60 oyiyi kwa abụọ (47MBps), nke dị anya site na 4K nke ụdị ndị ọzọ na-enye. Onwe ya, Agaghị m eji vidiyo vidiyo 4K eme ihe ọtụtụ afọ, mana maka ndị ọrụ ahụ na-eji teknụzụ a, ọ bụ nkọwa zuru ezu iji tụlee.
N'ikpeazụ, nke gị 8 megapixel n'ihu igwefoto O nwere ihe mmetụta Sony IMX179 nke ga-atọ ndị hụrụ onwe ha n'anya na oku vidiyo ụtọ, na-eme ezigbo njide, ọ bụrụhaala na anyị nọ na mpaghara na-enwu gbaa.
Foto ndi nlere na Huawei Mate 8
Huawei mere a ezigbo ọrụ na Huawei Mate 8, ekwentị ị nwere ike ịchọta maka ihe na-erughị euro 550 yana atụmatụ, gwụchara na nnwere onwe agaghị emechu gị ihu.
Onye na-emepụta Asia na-egosi afọ ole na ole na ọ nwere ike ihu nnukwu igwe nke ngalaba ahụ ihu na ihu na ekwentị a bụ ihe atụ ọhụrụ nke a. Huawei ọ ga - abụ onye ọzọ nwe ahịa telephony ahụ? ma ọ bụrụ na ha na-aga n'ihu na a na ọnụego, na m na-ama na-agwa gị na Nyocha Huawei P9 ga-eju gị anya, M na-atụ anya na Huawei na-aga inye ọtụtụ ihe ikwu banyere ya.
Chọ gị phablet dị ike nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọdịnaya ọ bụla nke mgbasa ozi na ọnụahịa ezi uche dị na ya, Huawei Mate 8 bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma iji tụlee.
Adịchaghị adịcha mma nke ekwentị dị egwu
Enweghi ike ịchị onwe ya: ụbọchị abụọ na-enweghị ọtụtụ nsogbu
Kacha mma elu-ọgwụgwụ phablet na okwu nke uru maka ego
Ihuenyo ya na-adịtụ mma ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na akụkụ QHD ndị ọzọ
Foto ihe osise nke Huawei Mate 8
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei Mate 8, nyocha na echiche
Ogo / ọnụahịa karịrị karịa Xiaomi Redmi Rịba ama 3 Pro…. O kwesịrị ọkara ma ọ nweghị ihe ọ bụla ị ga-enwe anyaụfụ; enweghị batrị, enweghị onyonyo, enweghị onye na-agụ akara mkpịsị aka, ... igwefoto ga-adị gburugburu, sd 650 bụ anụ ọhịa (nke elu elu n'etiti). na 6.0)…. Naanị ihe karịrị Redmi bụ na-emecha, na ọ bụghị site ukwuu. Redmi dị na Spain maka 250 e yana nkwa Spanish.
Phabet kacha mma ka bụ RMN 3 Pro, opekata mpe na mma / ọnụahịa.
Ọnụ ọnụ a dị oke ọnụ.
A ga-ewepụta Samsung Galaxy Note 6 na etiti Ọgọst
Ibudata ma wụnye ngwa WhatsApp ọhụrụ maka Windows na MAC. Ọ bara uru n'ezie?